किसानको आर्य–आर्जनमा जुनेलो खेती – Aarthik Dainik
०९ असोज २०७७
विचार Posted on ७ माघ २०७६, मंगलवार १७:४०
Author Shikhar Mc
जुनेलोको उत्पादनतर्फ अवलोकन गर्ने हो भने उन्नत जातको जुनेलो सरदर एक सयदेखि एक सय पन्ध्र दिनभित्रमा पाक्दछ । जुनेलो विशेषगरी मंसिरको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा पाक्दछ । जुनेलो पाक्नेबित्तिकै काट्नु पर्दछ नत्र जुनेको दाना झर्ने सम्भावना हुन्छ । जुनेलोको दाना कडा भएपछि अथवा २५ प्रतिशत चिस्यान कायम रहने गरी काट्नु पर्दछ । साधारणतया अरु जुनेलोको जातअनुसार एक सय पाँच दिनदेखि एक सय ४० दिनसम्ममा पाक्दछ । यो बाली पूर्णरूपले पाकेको यकिन भएपछि जुनेलोको बोटसमेत काटेर बालालाई अगल गर्नुपर्दछ । बालालाई लट्टीले चुटी ३÷४ दिन घाममा सुकाएर १३÷१५ प्रतिशत चिस्यान कायम गरेर मात्र भण्डारण गर्नुपर्दछ । विकसित देशमा भने यसको खेती उन्नत तरिकाबाट गरिएमा ५० क्वीन्टल प्रतिहेक्टरसम्म उत्पादन हुन्छ । यदि जुनेलो गाईवस्तुको आहाराको लागि खेती गर्ने हो भने एक सयदेखि एक सय २५ क्वीन्टल प्रतिहेक्टर उत्पादनसम्म हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ ।
विश्वमा जुनलो उपभोगको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अरु बालीहरूमध्ये चौथो खाद्यान्न बालीको स्तरमा पर्छ । एसियाका धेरैजसो मानिसहरूले यसलाई खाद्यान्नमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो बालीलाई अर्कोतिर अवलोकन गर्ने हो भने यसलाई घाँसको रूपमा पनि वस्तुभाउहरूलाई खुवाउने गरिएको पाइन्छ । यसको दानामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन हुनेहुँदा गाईवस्तुहरूको दुध उत्पादनको लागि राम्रो मानिन्छ । अमेरिका र यस्तै अन्य विकसित देशहरूले जुनेलो घाँस एवं दाना उद्योगको लागि कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गर्दछन् । हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने हो भने विशेषगरी पहाडी भागमा यो बढी पाइने गरेको छ । देशको पहाडी भेगमा जुनेलो विशेषगरी बिरामी भएका मानिसहरूलाई खुवाउन हल्का खानाको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । अतः जुनेला बालीलाई साच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देशको कृषि तथयाङ्कमा समावेश भएको पाइँदैन । यो बाली पूर्णरूपमा लोप भइसकेको देखिन्छ । तर, पनि हाम्रा देशका कुना कन्दराहरूमा बसोबास गर्ने साना कृषकहरूले मात्र थोरै लगानीमा हुने भएकोले यो खेती गरको पाइन्छ । तर, यो खेती उनीहरूले आफ्नो दैनिक खानामा प्रयोग गर्न मात्र खेती गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको महत्व भने आज आएर धेरै नै भएको पाइन्छ । यो रोगी तथा बिरामीलगायत विभिन्न मानिसहरूको खाद्यान्नमा प्रयोग गर्न ज्यादै नै उपयुक्त भएको विज्ञहरूको ठहर छ । यसले केटाकेटीदेखि लिएर वृद्ध सबैलाई खुवाउन योग्य खाद्यान्नको रूपमा रहेको पोषणविज्ञहरूको भनाइ अर्कोतिर रहेको पाइन्छ । यसमा प्रोटिन १० देखि १२ प्रतिशत, चिल्लोपदार्थ तीन प्रतिशत र कार्बोहाइडेड ७० प्रतिशत पाइन्छ । यो बाली खास गरिकन समुद्र सतहबाट एक हजार मिटरदेखि एक हजार पाँच सयसम्मको उचाइमा राम्रो उत्पादन भएको पाइन्छ ।
जुनेलोको उपयोग विभिन्न देशहरूमा विभिन्न प्रकारले प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा भने जुनेलोको प्रयोग खासगरी कन खाद्यान्नको रूपमा जस्तैः रोटी, ढिँडो, हलुवा, भात र दाना भुटेर खाजाको रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । त्यसैगरी पहाडी भेगमा पशुहरूको दाना र घाँसको रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । कुखुरा, हाँसको लागि चारो बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै धरेलु उद्योगधन्दाहरूमा पनि पेयपदार्थमा पनि प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । त्यस्तै पशुहरूको लागि साइलेज बनाई खुवाउने प्रचलन पनि रहेको पाइन्छ । यो खेती खासगरी सबै किसिमको हावापानीमा भएको पाइन्छ । यो बालीले सुख्खा सहन सक्दछ । सिंचाइको सुविधा नभएको टार, फाँट तथा भित्री मधेशको क्षेत्रहरूमा यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । जाडो मौसममा खेती गर्दा भाद्र महिनाको दोस्रो हप्तादेखि असोजको पहिलो हप्तासम्म बीउ छरिसक्नु पर्दछ । गर्मी मौसममा खेती गर्दा वैशाखदेखि जेठसम्म बीउ छर्नु पर्दछ । यसको केही ठण्डा क्षेत्रमा खेती गर्न उपयुक्त हुने जातको विकास गर्न मेक्सिको र अन्य विकसित देशहरूमा अनुसन्धान कार्य जारी छ । कम चिस्यान भए पुग्ने र खडेरी सहन सक्ने हुनाले विशेषगरी कम पानी पर्ने उष्ण क्षेत्रमा सफल हुने बालीहरूमा यसको प्रमुख स्थान छ ।
जुनेलोको उत्पादनतर्फ अवलोकन गर्ने हो भने उन्नत जातको जुनेलो सरदर एक सयदेखि एक सय पन्ध्र दिनभित्रमा पाक्दछ । जुनेलो विशेषगरी मंसिरको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा पाक्दछ । जुनेलो पाक्नेबित्तिकै काट्नु पर्दछ नत्र जुनेको दाना झर्ने सम्भावना हुन्छ । जुनेलोको दाना कडा भएपछि अथवा २५ प्रतिशत चिस्यान कायम रहने गरी काट्नु पर्दछ । साधारणतया अरु जुनेलोको जातअनुसार एक सय पाँच दिनदेखि एक सय ४० दिनसम्ममा पाक्दछ । यो बाली पूर्णरूपले पाकेको यकिन भएपछि जुनेलोको बोटसमेत काटेर बालालाई अगल गर्नुपर्दछ । बालालाई लट्टीले चुटी ३÷४ दिन घाममा सुकाएर १३÷१५ प्रतिशत चिस्यान कायम गरेर मात्र भण्डारण गर्नुपर्दछ । विकसित देशमा भने यसको खेती उन्नत तरिकाबाट गरिएमा ५० क्वीन्टल प्रतिहेक्टरसम्म उत्पादन हुन्छ । यदि जुनेलो गाईवस्तुको आहाराको लागि खेती गर्ने हो भने एक सयदेखि एक सय २५ क्वीन्टल प्रतिहेक्टर उत्पादनसम्म हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । तर, हाम्रो देशको उत्पादन आँकडालाई अवलोकन गर्ने हो भने सरदर उत्पादन दुईदेखि साढे दुई टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापरलगायत विभिन्न बालीनालीहरूको खेती हुँदै आएको छ । यसबाहेको जुनेलो पनि एक किसिमको बाली हो । यो बाली अहिले आएर प्रायः नगण्यरूपमा रहेको पाइन्छ । यो पहाडी भू–भागमा प्रयोग गर्ने खाद्यपदार्थमध्ये जुनेलो पनि एक किसिमको खाद्यान्न हो । हाम्रो देशमा यस खेतीलाई त्यति महत्व दिएको छैन । यो बालीको महत्व र खेती गर्ने तौरतरिकाबारे किसानहरूलाई पनि राम्रो ज्ञान नभएको कारणले गर्दा पनि यसको खेती कम मात्रामा भएको पाइन्छ । देशमा खासगरिकन यसको खेती घरको वरिपरि र छेउछाउमा स–साना क्षेत्रहरूमा गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि यो खेती नगण्यरूपमा भएको हो । यो सानोतिनो आय–आर्जन हुने कृषकहरूले मात्र यसको खेती गर्दै आएको पाइन्छ । खासगरी मुलुकको दूरदराजहरूमा समेत यसको खेती गरेको पाइन्छ । यो पहिले गाउँघरमा गरिब कृषकहरूले मात्र भुटेर खाजाको रूपमा र ढिँडोकोे रूपमा खाने हुँदा जुनेलोलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो भने विगत एक दशकदेखि राजधानीका विभिन्न तारे होटल एवं रेष्टुराहरूमा धनी भनाउँदाहरू यसको विभिन्न परिकारहरूको स्वाद चाख्न जानेहरूको लाम लाग्ने गरेको पाइन्छ । यो खेतीलाई बढी पानी परेमा कुहिने हुँदा सिंचाइको आवश्यक नपर्ने र चाँडै पाक्ने बालीमा पर्छ । हाल यस खाद्यान्नमा सरकारले खासै चाँसो नदेखाएको हुनाले यो बालीनालीको उत्पादनमा समेत लोप हुने स्थिति खड्किएको छ । जुनेलो बालीको माग भने दिनप्रतिदिन बढ्दो रूपमा छ भने उत्पादन कम भएको कारणले गर्दा मागअनुरूप आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यस कारणले गर्दा बेलैमा सरकारले यस बालीप्रति सोचविचार पु¥याएर जुनेलो खेतीलाई आवश्यक महत्व दिई मल, बीउ, उन्नत औजारहरू र प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्था मिलाएको खण्डमा यसबालीको विकास भई स–साना कृषकहरूको दैनिक रोजगारीको साथसाथै आय–आर्जनमा समेत वृद्धि हुने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।विश्वनाथ खरेल
“कालापानी मात्र होइन नाभी, गुञ्जी, कुटी पनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ”
२४ पुष २०७६, बिहीबार १०:२८
राजनीतिक व्यवस्थापनको अस्पष्टताले समृद्धि र सुखी जनता बनेको नारा
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १९:०२
असुरक्षित हुँदै गएको संविधानमा मडारिएको खतरा
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १६:५६
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १०:०९
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:३३
साक्षरताको अभियान कति सफल, कति असफल ?
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:१३
आत्मनिर्भरताको पथमा सिमेन्ट उद्योग
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १०:११
कोरोना अमेरीकाद्वारा उत्पादित जैवीक हतियार भएको रुसी बैज्ञानिकको दाबी !
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:०१
सम्पत्ति शुद्धीकरण उल्लङ्घनमा वेस्टप्याक बैंकलाई अस्ट्रेलियामा ऐतिहासिक
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:५६
भारतको यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र मेला अर्को वर्षलाई स-यो
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:५४
कोरोनाभाइरसबाट विश्वभर तीन करोड २१ लाख संक्रमित, नौ लाख ८२ हजारको मृत्यु
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:४३
ग्रिसको मोरिया क्याम्पबाट करिब पाँच सय आप्रवासी बालबालिकालाई फ्रान्स ल्याइने